Iindlela Ezi-4 Zokuba Luvavanyo Oluhle-Ukuthatha
Ukuba uthe watsho, "andiyena mdlali ovavanyayo," okanye "andiyi kuyenza kakuhle iimvavanyo," ngoko ulungele ukuba uqaphele eli nqaku. Ngokuqinisekileyo, awuyi kuyenza kakuhle uvavanyo ukuba ukhethe ukuba ungayifundeli, kodwa kukho iindlela ezinokukhawuleza kwaye ezilula ukuphucula ubuchule bakho bokuvavanya, nokuba ngaba uvavanyo - uvavanyo lwelizwe, i- SAT , ACT , GRE , i- LSAT okanye umlinganiselo wakho wokuba uvavanyo olukhethiweyo lokufunda esikolweni - luza kusasa! Isandi njengommangaliso? Akunjalo. Kulula kunokuba ucinga ukuba uhambe ukusuka ekubeni ngumntu ozama ukuvavanya ukuvavanya . Thatha iindlela ezilandelayo unokuphucula umdlalo wakho wokuvavanya.
Getty Images | Kondoros iCatalin
Okokuqala kwaye ngokugqithiseleyo, uya kufuna ukuyeka yonke loo nto, "andiyena umgcini-mgca wokuvavanya." Le ilebula, ebizwa ngokuba yinkinga yokuqonda, yenza okubi ngakumbi kunokuba uyazi! Ngokomxholo opapashwe kwi- Journal of Assessment Psychoeducational judging of the ability to read during a test timed between 35 ADHD abafundi abathi bangabalingisi abahluphekayo kunye nabafundi abangaba-185 abangenalo, ulwahlulo olulodwa lwaluyimilinganiselo yokuvavanya-ukuthatha uxinzelelo kunye noxinzelelo ngexesha u kufunda. Iintsana ezizibiza ngokuba ngabahloli abahluphekileyo babonisa ukuqonda okufanayo okufunda, ukuchithwa, ukukhawuleza, ukusetyenziswa kwezigama kunye nezicwangciso zokuvavanya njengabo abangazange bazibhalile ngokwabo, kodwa babonisa uxinzelelo oluphezulu kakhulu ngaphambili nangethuba lokuhlola. Kwaye ukuvavanya ukuxhalabisa kungonakalisa amanqaku amahle!
Ukuba ukholelwa ukuba yinto ethile, uphando lubonisa ukuba uya kuba, nangona ukuba iinkcukacha zibonakalisa ngenye indlela. Ndiqinisekile ukuba abafundi ababethetha ngokuthi "abahloli abahluphekileyo" kwisifundo esiphakamisiweyo ngasentla babemangalisiwe xa beva ukuba bekwenzile kunye "nabahloli abahle!" Ukuba uye wandixelela iminyaka ukuba ungumhloli ohluphekileyo, ngoko uya kuphila ngokubhekiselele kulowokulindela; Ngakolunye uhlangothi, ukuba uvumelekile ukuba ukholelwe ukuba unako ukufumana amanqaku amahle, ngoko uya kulunge kangcono kunokuba uya kuba uyazibetha. Kholwa kwaye unokukwazi ukufezekisa, bahlobo bam.
Gcina umkhondo wexesha
Enye yeendlela zokuba ngumcebisi-mvavanyo ulungile, kodwa ungakhathazeki, malunga nexesha lakho. Kuphela imathematika. Uza kufumana amanqaku aphantsi ukuba ufanele ugijime ekugqibeleni ngenxa yokuba unesihe kakhulu ngexesha lakho ekuqaleni kovavanyo. Ngaphambi kokuvavanya, thabatha imizuzwana embalwa ukubala ixesha elingakanani lombuzo ngamnye. Ngokomzekelo, ukuba unemizuzu engama-45 ukuphendula imibuzo engama-60, ke 45/60 = .75. I-75% yemizuzu engama-45 imizuzwana. Unemizuzu engama-45 ukuphendula umbuzo ngamnye. Ukuba uqaphela ukuba uthatha imizuzwana engama-45 rhoqo xa uphendula, ngoko uya kulahleka ngokupheleleyo amaphuzu ekupheleni kolu vavanyo kuba awuyi kuba nexesha elaneleyo lokunika loo mibuzo yokugqibela eyadutshulwa kakuhle.
Ukuba ufumana ukulwa phakathi kwezinto ezimbini zokuphendula kwaye sele usuphelile umda wexesha lombuzo, ujikeleze umbuzo uze uqhubele kwabanye, ezinye zazo zibe lula. Buyela kumntu onzima ukuba unayo ixesha ekupheleni.
Funda amaGrade omde ngokuphumelelayo
Eminye yexesha elona xesha lininzi kakhulu kunye namaphuzu okunciphisa amanqaku ekuvavanyeni yile mibhalo yokufunda ende kunye nemibuzo elandelayo. Baxoshe ngokukhawuleza kwaye ngokufanelekileyo kwaye uya kuba yindlela eya kuba ngumdlali ovavanya kakuhle. Landela le nkqubo:
Funda isihloko sesigatshana, ngoko uyazi ukuba yintoni isihloko ojongene nayo.
Hamba ngemibuzo ehambelana nevesi kwaye uphendule nayiphi na into ebhekisela kumgca othile, inombolo yomhlathi, okanye igama. Ewe, oku phambi kokuba ufunde yonke into.
Emva koko, funda inqaku ngokukhawuleza, ubeka izibizo ezibalulekileyo kunye nezenzi njengoko uhamba.
Jonga phantsi isishwankathelo esifutshane somhlathi ngamnye (amagama amabini anesithathu) kwimida.
Phendula yonke imibuzo yokufunda.
Ukuphendula imibuzo elula kuqala - abo babhekisela kwingxenye yesahluko-kukunika ithuba lokufumana amanqaku athile ngokukhawuleza. Ukucwangcisa izibizo ezibalulekileyo kunye nezenzi njengoko ufunda kungekukho nje kukunceda ukhumbule oko ufunde , kwakhona kukunika indawo ethile ekubhekiselele kuyo xa uphendula imibuzo enzima. Ukufingqa kwiimida eziphambili kukubalulekileyo ekuqondeni ivesi ngokubanzi. Ngaphezu koko, kukuvumela ukuba uphendule "Yintoni eyona nto ingundoqo yomhlathi 2?" iintlobo zeemibuzo kwi-flash.
Sebenzisa Iimpendulo Kwi-Advantage yakho
Getty Images | Michelle Joyce
Kwiimvavanyo ezininzi zokukhetha, impendulo echanekileyo ilapha phambi kwakho. Into kuphela omele ukwenze yohlukana phakathi kweempendulo ezifanayo zokukhetha ukhetho oluchanekileyo.
Khangela amagama anzulu kwiimpendulo ezinjenge "never" okanye "njalo." Amagama afana naloo nto aya kuphelisa ukukhethwa kwempendulo ngenxa yokuba aphelisa amanqaku amaninzi. Qaphela ukuchasa, naye. Umlobi ovavanyo uzakubeka ngokuchasene ngqo nempendulo echanekileyo njengenye yezinto ozikhethayo, usebenzisa igama elifanayo ukuvavanya ukukwazi kwakho ukufunda ngokucokisekileyo. Faka izimpendulo ngezibalo zemathematika okanye ukugqitywa kwesivakalisi ukuze ubone impendulo engafanelekileyo kunokuzama ukuyicombulula ngokuthe ngqo. Unokufumana isisombululo ngokukhawuleza ngaloo ndlela!
Lewandowski, Lawrence, Gathje, Rebecca A., Lovett, Benjamin J., & Gordon, uMichael. (2012). Uvavanyo-Ukuthabatha izakhono kwiiKholeji zabaFundi kunye kunye no-ADHD. I-Journal ye-Psychoeducational Assessment 31: 41-52.
Indlela yokuFundisisa kwi-Multiple Choice Exam
Iphepha lokusebenzela 1 Impendulo eyintloko: I-Tone Tone
Ukuxhatshazwa kovavanyo lokuxhalabisa kwiiNtshukumo ezi-5
Iingcebiso ezi-10 eziphezulu ze-GRE Test Tips
Isivivinyo esiQinisekisiweyo esibalulekileyo sithathe iingcebiso kubazali
Iiprogram zeNgcono zeNgcaciso ezimhlophe
Ziziphi iingcali ezifuna ukuzazi malunga ne-copyright
Uyazi Njani Xa Ipeyinti iphelile?
UQueens Uthiwa ngu-Isabella
Zigqirha ezimbini? Zilungile ngeSpanish
I-Admission University University
Izinto ezili-10 zokufunda kwiKongeza kwiWicca
Ngokuphathelele uSomlomo weNdlu yabameli
UJudith waseFransi (uYudith waseFlanders): uSaxon wesiNgesikazikazikazikazi
Indlela yokuPenda njengeMonet
I-Barium - Izinto eziMlilo
Ngokuphathelele i-Spiderwick yeziKronike
Ukuxhaswa kwe-2 Piano Chords
I-25 Greatest Nas Songs
Indlela yokuCoca ngokuCoca
I-Synesthesia (uLwimi noLwazi)
Yiyiphi iMithetho ethi Ngayiphi iClubs ezinokukwazi ukuzenza kwiGrafu yakho yeGalofu
Izibhungana ezi-7 zifumaneka kuMilkweed
IiNewu zeMculo eziNtsha kunye neZiphuculweyo zePeriod
Yintoni i-ID evumelekileyo kwi-SAT?
UMthetho we-Immigration Act ka-1917
Bala i-root Root Mean Velocity ye-Gas Particles